Boqorka cusub ee dalka Cumaan oo lagu dhawaaqay, kaddib markii uu geeriyooday..
Cumaan (Halqaran.com) – Haitham bin Tariq Al Saciid ayaa loo Magacaabay inuu noqdo boqorka cusub dalka Cuman, kadib dhimashadii ina adeerkiis Sultan Qaboos bin Saciid Al Saciid, sidda ay ku warantay Warbaahinta Gudaha ee Cumaan.
Wasiirkii hore ee dhaqanka ayaa la dhaariyey kaddib markii ay soo gudbiyeen qoyska Boqortooyada.
Dastuurka Cumaan ayaa wuxuu dhigayaa in qofka guuleysta uu u magacowdo qoyska boqortooyada sedex maalmood gudahood markii carshiga uu baneeyey.
Suldaanka waa inuu xubin ka ahaadaa qoyska boqortooyada, sidoo kale waa in uu ahaada “Muslim, qaan gaar, caqli gal ah.
Tags: dalka Cumaan oo boqor cusub ku dhawaaqay, Haitham bin Tariq Al Saciid, Sultan Qaboos
Farmajo and Afwerki discuss implementation of tripartite agreement
Maxaa ka ogtahay tirada denbiyada ka dhacay deegaannada Puntland sanadkii tegay 2019-ka?